बागलुङ नगरपालिका–३ स्थित कृषि गाउँको खेतमा रोपाइँ गर्दै किसान । यहाँ हालसम्म ३५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । तस्बिर : रामबहादुर थापा, बागलुङ, रासस
म्याग्दीको मालीका गाउँपालिका २ रुमको खानीबाट निकालेर बजार पठाउन सङ्कलन गरिएको स्लेट ढुङ्गा । घर छाउन र भुइँमा बिछ्याउन प्रयोग हुने स्लेट ढुङ्गा यहाँको आयस्रोत रहेको छ । तस्बिर : सन्तोष गौतम, म्याग्दी, रासस
गोरखाको सिरानचोक ६ गाँखुको महटारस्थित दरौंदी फाँटमा रोपाइँका लागि बीउ काढ्दै महिला । गोरखामा अहिलेसम्म १० प्रतिशत खेतमा मात्र रोपाइँ भएको छ । तस्बिर : प्रशन्न पोखरेल, गोरखा, रासस
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गोही
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको गोही प्रजनन् केन्द्रमा रहेको घडियाल गोही । यहाँका गोहीका बच्चाहरु एक बर्ष नपुग्दै मर्ने थालेपछि अनुसन्धान थालिएको छ । तस्बिर : नारायण ढुंगाना, रत्ननगर(चितवन), रासस
अपहरण गरेको विमान सङ्ग्रहालयमा
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन सफल बनाउन पैसा जुटाउने उद्देश्यले नेपाली काँग्रेसले वि सं. २०३० जेठ ३० गते विराटनगरबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको यो विमान अपहरण गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको पैसा कब्जा गरेको थियो । दुर्घटनामा परेर धुजा धुजा बनेको यो विमान बिपी सङ्ग्रहालयमा ल्याई पार्टपूर्जा बनाएर अवलोकनका लागि राख्ने तयारी गरिएको छ...
असारे गीतसँगै रोपाइँ
बागलुङ नगरपालिका–३ कृषि गाउँका किसान धान दिवसका अवसरमा मादलको तालमा असारे गीत आउँदै धान रोपाइँ गर्दै । तस्बिर : रामबहादुर थापा, बागलुङ ,रासस
म्याग्दीमा धान रोपाइँ
म्याग्दीको मंगला गाउँपालीका–२ रनवाङमा धान रोपाइँमा व्यस्त कृषकहरु । असार १५ सम्म म्याग्दीमा २५ प्रतिशत खेतमा धान रोपाइँ भएको छ । तस्बिर : सन्तोष गौतम, म्याग्दी, रासस
सौराहामा धान दिवस (फोटो फिचर सहित)
चितवनको रत्ननगरस्थित सौराहामा बिहीबार धान दिवसमा रोपाइँमा रमाइलो गर्दै स्थानीयवासीका साथमा अतिथिहरु । तस्बिर : रासस
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाâ€“२ बगरफाँटमा गैरकानुनीरुपमा नदी उत्खनन् गरी ढुङ्गा र बालुवा निकाल्दै । यसरी नदी उत्खनन गर्दा नजिकको बस्ती खतरामा परेको छ । तस्बिर : धु्रबसागर शर्मा, रासस, बेनी म्याग्दी
दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएसंगै भोक्राहा गाउपालिकाका मतपेटीकाहरु मतगणना स्थल तर्फ लग्दै । तस्बिर : अजितकुमार झा, इनरुवा, रासस
म्याग्दीमा टिमुरका बिरुवा
बेनीस्थित जिल्ला वन कार्यालयको नर्सरीमा उत्पादित मसलेदार फल टिमुरका बिरुवा उपभोत्तालाई वितरण गरिँदै । म्याग्दीमा यस वर्ष ३५ हजार टिमुरका बिरुवा उत्पादन भएको छ । तस्बिर : सन्तोष गौतम, म्याग्दी, रासस
इलाममा बिरामीले मतदान
इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाको सिंहदेवी मावि मतदान केन्द्र ‘ख’ मा स्ट्रेचरमा बिरामीलाई मतदान गर्न ल्याइँदै । तस्बिर : गोविन्द लामिछाने, इलाम, रासस
इटहरी मेयरका उम्मेदवार राेहित प्रसार्इ मतदान गर्दै
९० वर्षीय नेपालीले मतदान
इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाको सिंहदेवी मावि मतदान केन्द्रबाट बुधबार मतदान गर्दै ९० वर्षीय नरबहादुर नेपाली । तस्बिर : गोविन्द लामिछाने, इलाम, रासस
मतदान केन्द्रमा सेल्फी माेह (फाेटाे फिचर)
मतदान गर्न लामबद्ध मतदाता
रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका– ५ रुकुमेनी मतदान केन्द्रमा आज बिहान मतदान गर्नका लागि लामबद्ध भएका मतदाताहरु । यहाँ उत्साहका साथ अहिले मतदान भइरहेको छ । तस्बिर : लोकेन्द्र खनाल÷रासस रुकुम
तस्विर – एस के अनलाइनबाट तस्विर – काेशी अनलाइन
माेरङकाे मच्छिन्द्र मा.वि. केरावारीमा मतदान सुरु (फाेटाे फिचर)
मच्छिन्द्र मा.वि. केरावारीमा मतदान सुरु तस्विरः सन्ताेस श्रेष्ठ
पूर्व जर्नेल फुदोङ, बगैंचामा रञ्जुको लास र तनावग्रस्त इटहरी (१४ तस्विरहरू)
इटहरी / बगैचामा मृत अवस्थामा फेला परेकी २९ बर्षीया महिला रञ्जु ठकुरीकाे बिषयमा घटना गुपचुप राख्ने प्रयास गरेकाे एवं गैर जिम्मेवारी अभिब्याक्ती दिएकाे भन्दै अाक्राेसित स्थानीयहरूले मंगलबार दिउसाे पहिलाे संबिधानसभाकाे निर्वाचनमा तत्कालिन एमाअाेवादी तर्फका प्रत्यक्ष उम्मेद्वार तथा पूर्व जर्नेल कुमार फुदाेङमाथी निर्घात कुटपिट गरी घाइते बनाएका छन । यसै घटना संग सम्बन्धित ताजा १४ तस्विरहरू...
अलैँची विरुवा निकासी
लमजुङको भोजे र पसगाउँका नर्सरीबाट उत्पादित अलैँची विरुवा कास्की र स्याँङजामा निकासी हुँदै । अलैँचीको विरुवाबाट यहाँका किसानले लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । तस्बिर : सन्देश पौडेल, लमजुङ, रासस
म्याग्दीको बेनीमा कालीगण्डकी नदीले बगाएर ल्याएको दाउरा सङ्कलन गरिँदै । तस्बिर : सन्तोष गौतम, म्याग्दी, रासस
एक सय ५० मिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकास्थित हात्तिखालमा टनेल बोरिङ मेसिनबाट १२ किमि सुरुङ खनेर भेरी नदीको पानी बबईमा खसाल्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन आयोजनाको पहिलो चरणको सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको हो । तस्बिर : हेमन्त केसी, सुर्खेत, रासस
इस्लामिक धर्माबलम्बीहरुको महान पर्व इद–उल फित्रको अवसरमा नेपालगन्जको बिपी चोकस्थित जामामस्जिद इदगाहमा सामूहिक प्राथना गर्दै मुस्लिम समुदायी । तस्बिर : राकेशकुमार मिश्र खजुरा (बाँके), रासस
पोखराको पृथ्वीचोकस्थित एक सटरको छेउमा दुई सडक बालक आँप तथा स्याउ एक अर्कालाई भाग लगाउँदै । तस्बिरः वासुदेव पौडेल, पोखरा, रासस
मतदान परिचयपत्र लिँदै स्थानीय
दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको लागि सोमबार भोजपुरको जनसेवा मतदान केन्द्रबाट मतदाताहरु मतदान परिचयपत्र लिँदै । तस्बिरः सरिता राई, भोजपुर, रासस
मेसिनले पानी तानेर रोपाइँ
बर्षाको पानी अपर्याप्त भएपछि मेसिनले पानी तानेर आइतबार रोपाइँ गर्दै मध्यपुरथिमिका किसान । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ, रासस
नेपाली काँग्रेसकाे इटहरी चुनावी सभामा जे देखियाे (फाेटाे फिचर)
कृषि प्रतिनिधिलाई ट्याक्टर प्रदान
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत धान सुपरजोन झापाको बनियानीमा आइतबार कृषि सहकारीका प्रतिनिधिलाई प्रदान गरिएको ट्याक्टर । तस्बिर : रासस
नेपालकै ‘होचा’ उम्मेद्वार
नेपालकै ‘होचा’ उम्मेद्वार पंकज कार्की । उहाँ झापा भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ को वडा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नुभएको छ । तस्बिर : सन्तोष शर्मा, रासस
धानको बीउ काढ्दै
१४ औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा खोटाङको सोल्मामा शनिबार आयोजना गरिएको रोपाई कार्यक्रममा धानको बीउ काढ्दै जिल्लास्थित सरकारी तथा गैंरसरकारी कार्यालयका महिला कर्मचारी । ‘दुई बाली धानको विस्तार, आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ खोटाङमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ । तस्बिर : केदार मगर, खोटाङ, रासस
विश्व सम्पदा क्षेत्रको सडक
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्धनाथ स्तुप पर्यटकीय क्षेत्रको सडकको अवस्था । तस्बिर : पूर्णप्रसाद मिश्र, रासस
नवलपरासीमा धान रोपाइँ
नवलपरासीका किसान धान रोपाइँका लागि बीउ उखेल्न व्यस्त । तस्बिर : पुरुषोत्तम सुबेदी, नवलपरासी, रासस
महिला केराको व्यापारमा
धरानको छाताचोक सडक पेटीमा महिलाहरु केराको व्यापारका लागि ग्राहकको प्रतिक्षामा बस्दै । तस्बिर : याम प्रधान, इटहरी, रासस
नेस्याङमा पोचो गुम्वा
दुर्घटनाका बखत हवाई संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन विमानस्थलमा गरिएको हवाई सुरक्षा पूर्वाभ्यासका क्रममा नक्कली विमानमा आगलागी गराउँदै । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त, रासस
नारायणगढ–मुग्लिन सडकको कालिखोलामा पहिरो
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको कालिखोला नजिकै बिहीबार राति खसेको पहिरो पन्छाइँदै । पहिरोमा ईलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनको भ्यान र एक ट्रक भीरबाट झर्दा भ्यानमा सवार प्रहरी सहायक निरीक्षकसहित दुईजना प्रहरीको मृत्यु हुनुको साथै दुई जना प्रहरी जवान बेपत्ता भएका छन् । तस्बिर : नारायण अधिकारी, चितवन, रासस
पोखराको फेवातालस्थित तालबाराहीमा दर्शन गर्ने भक्तजनको पर्खाइमा रहेका डुङ्गाहरु । अहिले यहाँ पर्यटकको आवागमनमा कमी आएको छ । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त, रासस
फलफूलका बिरूवा वितरण
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय इलामले किसानलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन ल्याएको विभिन्न जातका फलफूलका बिरूवाहरु अनुदानमा वितरण गरेको छ । तस्बिरः गोविन्द लामिछाने, इलाम, रासस
विद्यार्थी पौष्ट्रिक आहारा बोक्दै
जाजरकोटको कुशेगाउँपालिका वडा ५ स्थित पौष्ट्रिक आहाराको डिपोबाट कुशेगाउँपालिका वडा नं ७ स्थित नेरा आधारभूत विद्यालय समाकोटतर्फ पौष्ट्रिक आहारा बोकेर लग्दै कक्षा ५ का कृष्ण तिरुवा र कक्षा ४ का हस्त महर । विद्यार्थीलाई पौष्टिक आाहारा बोकाउन नपाइने भएपनि यहाँका अधिकांश ठाउँमा विद्यार्थीलाई नै बोकाएर लैजाने गरिन्छ । तस्बिर : हेमन्त केसी, जाजरकोट, रासस